China Medical Oxygen Generator Hospital Oxygen Generator Medical Oxygen Generator Equipment manufacturers kunye suppliers | OKANYE
I-Oxygen Generator yezoNyango yoNyango Izixhobo ze-Oxygen Generator
Senza isityalo se-PSA oksijini sisebenzisa itekhnoloji ye-PSA yamva nje (i-Pressure Swing Adsorption). Ukuba ngumenzi wezityalo zePSA ezikhokelayo, sisimo sethu sokuhambisa oomatshini beoksijini kubathengi bethu ngokuhambelana nemigangatho yamazwe aphesheya kodwa ixabiso elinokhuphiswano kakhulu. Sisebenzisa izinto ezisemgangathweni zeprimiyamu ezithengwe kubanikezeli ababalaseleyo kushishino. Ioksijini eveliswe kumvelisi wethu we-PSA oksijini iyahlangabezana neemfuno zeshishini kunye nezicelo zonyango. Iinkampani ezininzi ezivela kwihlabathi liphela zisebenzisa indawo yethu yePSA yeoksijini kwaye zivelisa ioksijini kwindawo yokusebenza kwazo.
Umvelisi weoksijini wethu uyasetyenziswa nasezibhedlele kuba ukufakwa kweoksijini yegesi kwindawo leyo kunceda izibhedlele ukuba zivelise ioksijini yazo kwaye ziyeke ukuxhomekeka kwiisilinda zeoksijini ezithengwe emarikeni. Ngabavelisi bethu beoksijini, amashishini kunye namaziko ezonyango ayakwazi ukufumana ukungaphazanyiswa kweoksijini. Inkampani yethu isebenzisa itekhnoloji yokusika ekwenzeni oomatshini beoksijini.
Iimpawu ezikhethekileyo zesityalo sokuvelisa ioksijini sePSA
Iinkqubo ezenzekelayo ezizenzekelayo zenzelwe ukusebenza zingakhathalelwanga.
Izityalo ze-PSA zihambelana ngokuthatha indawo encinci, indibano kwizikhephe, esele zenziwe zabonelelwa zivela kumzi-mveliso.
Ixesha lokuqalisa ngokukhawuleza lithatha kuphela imizuzu emi-5 ukuvelisa ioksijini ngococeko olufunekayo.
Unokuthenjwa ngokufumana unikezelo oluqhubekayo noluzinzileyo lweoksijini.
Ii-sieve ezihlala zihleli ezihlala iminyaka eli-12.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu wezityalo ze-PSA oksijini ziyathengiswa zishushu eMzantsi Melika empuma yeAsiaomgangatho oqinisekisiweyo wokusebenza okuphezulu
Okulandelayo: Ukuxinzezeleka okuphezulu kwePsa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Izixhobo zeNkunkuma yeOxygen
Umatshini ophethe ioksijini weoksijini
Umbane we-Oxygen Generator ye-Psa